Orinasa mpanadio varimbazaha China, mpamatsy fitaovana fanadiovana varimbazaha
Ny Intensive Dampener no fitaovana lehibe indrindra amin'ny fifehezana ny rano varimbazaha amin'ny dingan'ny fanadiovana varimbazaha amin'ny fikosoham-bary. Afaka manatsara ny habetsahan'ny fihenan'ny varimbazaha izy io, miantoka ny fanamainana ny varimbazaha varimbazaha, manatsara ny fahaizan'ny fikosoham-bary, manatsara ny hamafin'ny bran, mampihena ny endosperma hery ary mampihena ny firaiketan ny bran sy ny endosperma izay mahasoa hanatsarana ny fahombiazana amin'ny fikosoham-bary sy ny sivana vovoka. Ankoatr'izay dia manampy amin'ny fanatsarana ny vokatra vovoka sy ny kalitaon'ny mavokely. Ny milina dia manana tombony amin'ny fivoahana avo lenta, fanjifana angovo ambany, lanja maivana, habetsahan'ny fihenam-bidy, fanalefahana homogène, taham-pitotoana azo atokisana ary ambany. Ao anatin'ny dingan'ny famoahana ny varimbazaha dia mitana toerana madio kokoa izy io, mety amin'ny fanovana ara-teknika amin'ny farine lehibe sy salantsalany ary koba kely ary ny fisafidianana ireo fikosoham-bary vaovao.
Ny masinina ho an'ny varimbazaha katsaka, miaraka amina teknika avo lenta marobe, raha ampitahaina amin'ny masinina mitovy amin'izany avy any ampitan-dranomasina, ny andiany degermator MLT dia manaporofo fa tsara indrindra amin'ny fizotra sy ny fikitihana.
Ny aspiratera fanodinana rivotra dia ampiasaina amin'ny fanadiovana akora granular amin'ny fitehirizana voamadinika, lafarinina, sakafo, fanafody, solika, sakafo, fanaovana labiera ary indostria hafa. Ny aspirator manodina ny rivotra dia afaka manasaraka ny loto ambany sy ny akora (toy ny varimbazaha, orza, tanimbary, solika, katsaka, sns.) Amin'ny voamaina. Ny aspirator manodina ny rivotra dia mandray endrika rivotra mihidy, ka io masinina io ihany no manana ny asany amin'ny fanesorana vovoka. Izany dia afaka mamonjy milina fanesorana vovoka hafa. Ary noho izy tsy mifanakalo rivotra amin'ny any ivelany, noho izany dia afaka misoroka ny fahaverezan'ny hafanana izy ary tsy mandoto ny tontolo iainana.
Ny scourer marindrano dia matetika miasa miaraka amina fantsom-paniriana na fantsom-paniriana fanodinam-bokatra eo amin'ny fivoahany. Azon'izy ireo atao tsara ny manala ireo sombin-kazo mihintsy na loto ambonin'ny voa.